SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii 2-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Thursday, June 23, 2011 // 1 Jawaab
Qaybtii Koowaad ka akhri Halkan….
Bilowgii qarnigii XX-aad, xilliga maamulkii Faransiiska uu ku howlanaa mashruuca dekadda Jabuuti iyo dhismaha waddada tariinka, aragtida Soomaali wayn waxaa ololkeeda ay ka hureysey gobollada waqooyi-bari iyo waqooyi-galbeed ee Soomaaliya. Waxay caga-dhigatay labada gobo lee hadda lagu magacaabo Sool iyo Nugaal. Waxaa halkaas degey halgankii hanaqaadka noqdey ee uu horseedaha ka ahaa Sayid Maxamad Cabdulle Xasan. Dhaqdhaqaaqaasi wuxuu ahaa mid quudinayay aragtida ku dhisan in gumeysiga lala dagaalamo oo loo diido in uu si buuxda uga taliyo ciidda Soomaaliyeed. Dareenka uu xambaarsanaa dhaqdhaqaaqu wuxuu ahaa in fikraddaas la wada gaarsiiyo gobollada ay Soomaalidu degaan dhamaanood.
Nuskii danbe, 20-kii sano oo ay halgamayeen, Daraawiishtu waxay ahayd dowlad leh barlamaan iyo xeer. Waxay isu arkayeen in ay masuul ka yihiin ciidda Soomaaliya. Markasta oo ay dhambaallo is-dhaafsadaan xoogagga mustacmarka ah, Sayidku wuxuu u muuqdey nin u hadlayay dhamaan beelaha Soomaaliyeed. Suugaantii badneyd oo Sayidku uu waxaa laga fahmayaa sida uu u doonayay in aragtidiisa uu xoog ku gaarsiiyo beelaha Soomaaliyeed. Tixahan aanu tusaalaha u soo qaadaneyno waxay markhaati ka yihiin siduu u doonayay in Soomaaliya uu gacanta ugu dhigo.
Kii ooraah xumaan jiray haddaan aabe kaga yeerin
Jidka adari loo maro haddaan laga ugaaroobin
Ajiga waamo joogaa haddaan ololku soo g aarin
Adduunyada haddii aan ka shabin tan iyo Aw-dhiigle
Oo aanan albaabada qufulin ila-xirkii daarta
Dagaalladii cuslaa ee Sayid Maxamad uu waalidka ka ahaa, intooda badan waxay ka dhaceen gobollada waqooyi-galbeed, kuwaas oo Ingiriisku uu xilligaas qeybna degey qeybna ku sii socdey. Waxaa xusid mudan laba meelood ayaa joogitaanka shisheeyaha uu ku xoogganaa. Waxay ahaayeen Xamar iyo Ber-bera. Gobollada bariga iyo bartamaha, Talyaanigu weli ma uusan caga-dhigan oo laba saldanadood ayaa Soomaalida uga dhisnaa. Degmada Baargaal iyo degmada Hobyo oo labaduba ay ku sii jeedaan bad-waynta Hindiya ayaa u kala ahaa magaalo-madax.
Dabayaaqadii qarnigii XIX-aad, labadaas maamul iyo Talyaanigii waxay dhigteen heshiis maxmiyadeed. Laakiin waxay u madax-bannaanaayeen hannaankooda is-maamul ee gudaha, xiriiradooda ganacsi iyo dhismaha ciidamadooda. Labadaas maamul, inkasta oo goor danbe ay colloobeen dhaqdhaqaaqii Daraawiishta, misana colaadda dhex-martey waa ay koobneyd. Sababtu waxay ahayd, waa marka koowaade, sanooyinkaas hore labada maamul waxay soo dhoweeyeen qadiyaddii ay Daraawiishtu u joogsatey. Sanooyinkii danbe oo ay colloobeen, hoggaanka Daraawiishtu wuxuu ogaa labada saldano in ay u dhisnaayeen ciidamo xooggan oo iska caabiyi kara weerarkooda. Islamarkaas ma jirin maamullo reer Yurub ah oo si toos ah faraha ugula jiray noloshii dadkii ku dhaqnaa degaamada ay ka talinayeen labada saldano. Tusaale-dhig wanaagsan waxaa ah, Daraawiishta, iyaga oo Taleex fadhiya ayay u suuroobi wetdey in ay dhanka bari ay Dhuudo dhaafaan. Halka dhanka koonfureed ay si sahlan ku gaareen Beled-wayne.
Marka ay xaaladda Soomaaliya sidaas ahayd, dadku kuma ayan baraarugsanayn mashaariicda gumeynta iyo dhaxal-wareejinta ah ee la soo derestey noloshoodii. Sababtu waxay ahayd wacyiga dad-waynaha oo ahaa mid hooseeya. Beelaha Soomaaliyeed intooda badan reer miyi ayay ahaayeen. Maslaxad ay ilaashadaan oo dhaafsiisan dhulka ay xooluhu u daaqaan, ma ayan garanayn. Meelaha la oran karo wacyi ayaa yiil, islamarkaana illaa xad madax-bannaani ayay heysteen waxay ahayeen gobolladii ku guuleystey in ay taladooda ururiyaan. Waa saldanadihii ay ka talinayeen Boqor Cismaan Maxamuud, Suldaan Yuusuf Cali iyo Suldaan Maxamuud Cali Shire. Iyaga qudhoodu ka anfariireen Sayidka markii uu diley Garaad Cali (Garaadkii beelaha Dhulbahante). Islamarkaas waxaa jiray cadaadis kaga yimid dowladihii gumeysatada ahaa oo uga digey in ay ku dhowaadaan dhaqdhaqaaqa.
Sanadkii 1918-kii waxaa dhamaadey dagaal waynihii I-aad ee dunida. Dowladdii Ingiriiska waxaa soo waajahay walaac ay ka qaadey fowdadii adduunka ka dhacdey in ay sabab u noqoto in gacanteeda ay ka baxaan degaanadii ay gacanta ku heysey. Wasiirkii mustacmaraadka Lord Alfred Millner, oo ahaa ninka wal-walkaas xooggiisu uu ku dhacayay ayaa wuxuu arkayey, Soomaaliya in ay kamid tahay gobollada culeyska ku qabanaya dowladdiisa. Waxaa u muuqatey in uu Soomaaliya u soo diro ciidan xooggan oo soo af-jara shiddada ay Daraawiishtu ku heysey maamulka maxmiyadda ee British Somaliland. Lord Milner wuxuu ogaa in afar jeer ay dowladdiisu horey u qorsheysey weerar baaxad wayn oo ay ku soo af-jarto dhaqdhaqaaqa Daraawiishta. Laakiin ay si fool-xun ugu fashilmeen.
In Ingiriiska hubkii ugu danbeeyey uguna qalafsanaa uu u adeegsado dadkaas reer miyiga ah oo xaqooda difaacaya, waxay tilmaameysaa sida ay uga go’neyd in uu soo af-jaro colaadda. Sida muuqata wuxuu markaas ka leexdey qaabkii uu u dhigi jiray qorshayaashii hore ee dagaalka. Muuddadii 20-ka sano ahayd oo dagaalkaasi socdey waxaa Ingiriiska ka soo gaaray khasaaro baaxad wayn oo naf iyo maal leh. Waxaa kaga darneyd sumcad xumida magaciisa ay gaarsiinayeen wiilashii Soomaaliyeed ee geel-jirta ahaa. Qorshahan cusub wuxuu ahaa in uu xoogga saaro weerarka dhanka cirka ah. Waxaa xusid mudan, ciidanka cirka ee Ingiriiska (RAF – Royal Air Force) in uu xilligaas dhisan yahay muddo ah hal sano oo keliya. Ciidankaas ayaa waxaa la asaasey sanadkii 1918-kii. Xilliga la dejinayo qorshaha weerarkan waxay ahayd bartamihii sanadkii 1919-kii.
Bishii November 1919-kii ayuu Cap. Gorden wuxuu ka soo degey magaalada Ber-bera. Waxaa la socdey injineerkii u cayimi lahaa dhulka garoonka noqonaya iyo saraakiishii howl-wadeenada ahaa. Wax calaamad ah in ay ciidan yihiin ama ay duuliyayaal yihiin kama ayan muuqan. Meel 140 km. u jirta Ber-bera ayay ka bilaabeen laba howlood. Mid waxay ahayd ceel qodid oo ay indhaha dadka isaga duwayaan. Midda kale waxay ahayd dhul-sallixid oo ah halkii ay dayuuraduhu ka duuli lahaayeen. Ayaamo kadib, howl middaas lamid ah ayay Burco dibaddeeda ka bilaabeen. Bartamihii bishii disember, waxaa Ber-bera ka baxay oo dhanka burco ku dhaqaaqey 2.000 oo rati, kuwaas oo sidey wixii sahay ahaa oo lagu dagaalami lahaa. Lix cisho ayuu socdaalkii qaatay. Dabadeed waxay gaareen degaankii Burco. (An article for The Anglo-Somali War 1901-1920. Dansk Militærhistorisk Selskab – Chakoten, Major B. Axel, april 1982, Copenhagen – Denmark).
30/ 12- 1919-kii, waxaa Ber-bera soo gaaray markabkii sidey dayuuradaha. Isla maalintaas, qunsulkii Ingiriiska u fadhiyay Ber-bera F. G. Archer, mid dayuuradihii kamid ah ayuu wuxuu u direy xarumihii Daraawiishta iyo degaamo kamid ah meelihii ay dadku ku badnaayeen. Ujeeddadu waxay ahayd in ay ku soo daadiso waraaqo digniin ah oo qunsulku ku saxiixan yahay. Wuxuu ku qorey in uu cafis u fidinayo qof kasta oo Daraawiishta raacsan oo isa-soo dhiiba. Waxaa kaloo ku qornaa abaal marino kala duwam oo la siinayo qofkii soo qabta dad Sayidka uu ugu horeeyo iyo kuwo kamid ah dag-joogayaashiisii iyo duriyaddiisii.
20/ 1- 1920-kii ayaa xaruntii Daraawiishta lagu bilaabay weerarkii xagga cirka ahaa. Taasina waxay maalin ka danbeysey markii la diyaariyay ciidankii dhulka ka weerartami lahaa. Inkasta oo bambadii ugu horeysey lala beegsadey aqalkii uu degganaa Sayidka, misana waxba kuma uusan noqon oo waa uu ka baxsadey. Afar cisho ayay dayuuradihii ku noq-noqonayeen degaanka, iyaga oo bambeynayay wax kasta oo nool oo dhulka uga muuqda. Ka-sokow dadkii ku le’dey bambooyinka, waxaa goobihii la weeraray ku baaba’ay bahaahim u badan geel fardo iyo ari. Dabadeed waxaa degaankii galay ciidankii tirada yaraa oo horey loo diyaariyay. Iyagu waxay ahaayeen ciidankii la oran jiray Somaliland Camel Corps. (An article for The Anglo-Somali War 1901-1920. Dansk Militærhistorisk Selskab – Chakoten, Major B. Axel, april 1982, Copenhagen – Denmark).
Gobollada Soomaaliyeed ee Ingiriisku gumeysanayay waxay xilligaas kaga duwanaayeen kuwa kale, iyada oo xilligaas ay ka jirtay saboolnimo iyo dhaqaale xumi. Inkasta oo colaadihii xoogganaa oo muddada 20-ka sano ah ka socday gobolladaas ay raad ku lahaayeen saboolnimada halkaas tiil, misana sababo kale oo la xusi karo ayaa jiray. Marka gobolka la bar-bar dhigo gobollada kale, waxaanu heleynaa Jabuuti oo ay ku dhaqnaayeen Soomaali iyo Cafar, ayaa dadkaasi ay ka tira yaaraayeen kuwa ku dhaqan gobollada waqooyi. Islamarkaas, mashruucii dhismaha dekadda iyo waddada tariinka, waxay noloshoodii ku soo kordhisey ilo dhaqaale. Gobollada koonfureed, ayaa iyaguna Talyaanigu wuxuu geliyay maal-gelin xooggan. Mashaariic beero ah oo waa-wayn ayuu ka abuuray dhulka ay webiyadu maraan. Sidoo kale, laba mashruuc oo xooggan ayuu ka dhisey Xaafuun iyo Caluula. Midna cusbada ayaa laga dhoofin jiray midna Beeyada. Gobollada dhexe qudhooda hargaha iyo subagga ayuu ka dhoofsan jiray. Gobollada galbeedka ah, iyagu waxay ahaayeen dad xoolo raacato ah oo maamulkii Xabashida uusan weli soo gaarin. Waxay haysteen dhul ka biyo iyo baad badan gobollada waqooyi. (Somali Nationalism, Saadia Touval, 1963, p. 102, Massachusetts – USA).
Waxaa intaas weheliya Ingiriiska oo aanan marna ku tala-gelin in uu gobolladan ka dhiso dhismo-hoosaadyo iyo ilo dhaqaale. Sababta uu degaankan u daneynayay waxay ahayd oo keliya arin ah istraateejiyad siyaasadeed. Sidaa darteed, wixii dagaalkii Daraawiishta ka danbeeyey, arinta keliya oo maamulkii Ingiriiska uu ku dadaaley waxay ahayd in uu soo celiyo xasilloonidii degaanka iyo in uu ururiyo cashuur loogu adeego maamulka (The State and Rural Transformation in Northern Somalia, Abdi Ismail Samantar, 1989, p. 45, Wisconsin – USA).
1 Jawaab " SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii 2-aad "
Monday, June 27, 2011 at 7:45 pm
waan ku farxsanahay in saadiq iinow uu yahay faafiye soomaaliyeed u bareeray dhaxal gaadhsiinta soomalida wixii tagey.
waxaan ku leeyahay waxaan arkay qoraalo badan oo aad leedahay waxaanajeclahay inaad qorto buug soomali ku qoran oo soomaalidu arragto manfacooda.